admin – Page 70 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Entries posted by admin (Page 70)
By admin on January 19, 2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN) Real Madrid ayaa kulan adag marti qaadeysa naadiga Sevilla kulamada wajiga labaad ee horyaalka La Liga ama cayaaraha 20-aad ee todobaadkan. Los Blancos ayaa guul dirqi ah gaartay asbuucii hore waana guushoodii u horreysay ee sanadkan cusub markii ay ku bilaawdeen natiijooyin wareer ah. Ogeysiiska Cayaarta Tartanka: Premier League Waqtiga: […]
Sheekadii Kun Habeen iyo Habeen Qeybtii 2aad
By admin on January 19, 2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN) Sheekada waxay noo mareysay qeybtii koowaad markii 2-dii Boqor arkeen waxa beerta qasriga ka dhacaayo iyo hab-dhaqanka foosha xun ee ay ku kaceen Naagihii Qasriga oo ay ugu horeyso Naagtii Boqor Shahri-yaar, boqor shahri-yaar markuu arkay waxa naagtiisa sameyneyso ayuu caqligii ka duulay wuxuuna walaalkiisa kayar ku yiri ” nawad […]
DHAGEEYSO:-Barnaamijka Horumarinta ee Radio Beerlula,
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN) waxaan idin soo gudbineeynaa Barnaamijka Horumarinta Radio Beerlula, ee Magaalada Baladweyne waxaa soo jeedinaya:-Cabdulqaadir Cumar Ibraahim (nadaara) waxaa farsameeynaya:-Maxamed Yuusuf Cabdulaahi https://www.facebook.com/Beerlularadio/videos/1055470894645301/?t=12
DHAGEEYSO:-Barnaamijka Waxbarashada ee Radio Beerlula,
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN) waxaan idin soo gudbineeynaa Barnaamijka Waxbarashada Radio Beerlula, ee Magaalada Baladweyne waxaa soo jeedinaya:-Cumar Yuusuf Aadan (ameeriko) waxaa farsameeynaya:-Maxamed Yuusuf Cabdulaahi https://www.facebook.com/Beerlularadio/videos/361542941095086/?t=30
DHAGEEYSO:-Warka Subaxnimo ee Radio Beerlula,
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN) waxaan idin soo gudbineeynaa Warka Subaxnimo Radio Beerlula, ee Magaalada Baladweyne.. waxaa soo jeedinaya:-Maxamed Cabdi Saneey waxaa farsameeynaya:-Maxamed Yuusuf Cabdulaahi https://www.facebook.com/Beerlularadio/videos/314675049166052/?t=5
Higuain Oo Maanta Jimcaha Dhamestiro Doona Ku Biiritaanka Kooxda Chelsea
By admin on January 18, 2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Jimco, Janaayo, 18, 2019, (HNN) Kooxda Ac Milan Ayaa Ugu Dambeyn Aqbashay Inay Higuain U Ogolaadaan Ku Biiritaanka Kooxda Chelsea Sida Ay Haatan Daabacayaan Wargeesyada ka soo Baxa Gudaha Talyaaniga. Sarri ayaa ugu dambeyn Jebinaayo Xeerka u yaala Kooxda Chelsea Tasoo ahayd in aysan kooxda Xidigaha 30-sano jira aysan Wax hishiis ah aysan ka saxiixin. […]
Gattuso Oo Ganaax Kala Kulmay Xiriirka Talyaaniga.
Jimco, Janaayo, 18, 2019, (HNN) Xiriirka kubadda cagta talyaaniga ee magacooda loo soo gaabiyo FIGC ayaa ganaax garka u galiyay tababare Gennaro Gattuso. Tababarahan heerka caalamai ee reer talyaani ayaana lagu eedeeyay i uu fal celin aan anshax ahayn uu sameeyay kulanki xalay au ay C milan ku bor kuftay Juventus. Tababare Gattuso ayaana ganaax […]
Chelsea oo dooneysa inay Gonzalo Higuin kala hortagaan Arsenal kulanka Sabtida.
Jimco, Janaayo, 18, 2019, (HNN) Chelsea ayaa la warinayaa inay heshiis amaah ah ilaa dhammaadka kal ciyaareedkan la gaartay Juventus kaa oo ku aadan Gonzalo Higuain oo iminkaba amaah ku jooga AC Milan. Heshiiska ayaa waxaa qeyb ka ah inuu 12 bilood oo dheeri ah ku darsan karo qandaraaska waa haddii uu ka soo boxo […]
Aniga waan soo iibsaday Mohamed Salah ee ma aanan iibinin”
Jimco, Janaayo, 18, 2019, (HNN) Macalinkii horey ee kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa iska indha tiray in Mohamed Salah uu iibiyay xiligii uu ku sugnaa kooxda Chelsea. Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan marna ka codsanin isaga maamulka kooxda Chelsea inay iibiyaan Mohamed Salah, balse uu ka codsaday kaliya inay ku diraan qaab amaah […]
Jimco, Janaayo, 18, 2019, (HNN) Kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay qandaraaska u kordhisay difaaceeda garabka bidix ee Andrew Robertson, iyadoo u ogolaatay in waqti dheer uu sii joogo garoonka Anfield. Liverpool ayaa war rasmi ah ay ku soo daabacday website-keeda rasmiga ah iyo boggaga rasmiga ah ay ku leedahay baraha […]